विभाग खारेज हुने वा नहुने दुवै अवधारणामा काम भैरहेको छ - Visit rara lake in Nepal.
संवाददाता : डा. राजेन्द्र पन्त, महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रकाशित मिति : १९ असार २०७४, सोमबार १६:३२ प्रकाशित मिति : जुलाई 3, 2017
नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यका अधिकारहरु विभाग तथा मन्त्रालयसँग माग गर्ने पक्का छ । त्यसकारण हामीले पनि उहाँहरुलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषयमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाइसकेका छौँं । पुरानो संरचनाबाट नयाँ संरचनामा जाँदा केही समस्या आउन सक्लान् । तर, संक्रमणकालीन समयमा क्रमशः ती गाँठाहरुलाई फुकाउँदै जाने हो । जनप्रतिनिधिलाई समुदायको समस्या’bout राम्रै ज्ञान हुन्छ । हामीले आगामी साउनको पहिलो साता सात वटै प्रदेशमा मेयर, उपमेयर र कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर स्वास्थ्य क्षेत्रका योजना, कार्यक्रम, प्राथमिकता, गर्न सकिने काम र अन्य योजना’bout छलफल गर्ने तयारी गरेका छौँ । यसले उहाँहरुलाई स्वास्थ्यका समस्या सम्बोधन गर्न सजिलो हुनेछ । बजेट सदुपयोगदेखि अन्य योजना’bout पनि उहाँहरुलाई जानकारी दिने र सरसल्लाह गर्ने योजना छ । यो भनेकै जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यका अधिकारहरु क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने प्रक्रियाको सुरुवात हो।
स्वास्थ्यका कार्यालयहरुमा हुने बेथिति र औषधिको उपलब्धता’bout सधैँ प्रश्न उठ्ने गर्छ । यो गुनासो कसरी सम्बोधन गर्ने ?
जनताको आकांक्षा परिपूर्ति गर्न सबैभन्दा पहिले सेवालाई परिभाषित गर्नु जरुरी छ । कुन तहबाट कुन सेवा पाइन्छ भन्ने’bout नागरिकलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । अहिले हेल्थपोस्टबाटै सारा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बढेको छ । तर हेल्थपोस्टले के–के सेवा दिन्छ भन्ने’bout जनचेतना जगाउन सकेमा त्यहाँ नहुने सेवाका लागि दबाब दिने क्रम घट्छ । नागरिकले आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य निकायबाट के–के सेवा पाइन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । साथै, स्वास्थ्यका कर्मचारीले पनि तोकिएको सेवा दिनुपर्छ । यी दुई काम गर्न सकियो भने अहिले आएका धेरै गुनासा हराएर जानेछन् । अबका दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ल्याब लगायतका उपकरण र सुविधा दिनुपर्छ । सुविधा र उपकरणहरु नहुने हो भने डाक्टरहरुको उपस्थितिले मात्रै सेवाको स्तर बढ्दैन।
डाक्टरहरु शहरमा मात्रै थुप्रिए भन्ने आरोप’bout के भन्नु हुन्छ ?
बाँकी चार वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर पठाएपछि कुनैमा पनि डाक्टर नपुगेको अवस्था रहनेछैन । अब क्षेत्र र जिल्लाले डाक्टर बसे/नबसेको हेर्नुपर्छ । समूदायले पनि उनीहरुले सेवा दिएको नदिएको’bout अनुगमन गर्नुपर्छ । डाक्टरहरुले कार्यक्षेत्रमा काम नगरी दायाँबायाँ गरे कारबाही गर्ने जिम्मेवारी उनीहरुको पनि हो । अब कार्यक्षेत्रमा गएका डाक्टरहरुलाई त्यहीँ टिकाउनु सबैको जिम्मेवारी हो।
छात्रवृत्तिका डाक्टरहरुको मनोवृत्ति नै दुर्गममा नजाने भन्ने छ । काठमाडौँ ’round, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर जस्ता सुविधा सम्पन्न ठाउँबाहेक दुर्गममा उनीहरु जानै नचाहने स्वभावका भइसके । उनीहरुलाई त्यहाँ गएर अतिरिक्त लाभ र सुविधा केही पनि नआउने भएकाले दुर्गममा जान प्रोत्साहन नमिलेको हुन सक्छ । कलेजमा भर्ना भएदेखि नै जसरी–तसरी दुई वर्ष काटियो भने पोस्टग्राजुएसनतिर लाग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थिति हावी भयो । कलेजमा पनि दुर्गममा जाने, सेवा दिने भन्ने भावनालाई प्रवर्धन गर्ने खालको वातावरण बन्न सकेन । अर्कोतर्फ उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउन नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी हो।
काठमाडौँ तथा शहरी क्षेत्रमा परिवार नियोेजनका साधन स्वास्थ्य चौकीको साटो औषधि पसलमा किन्ने धेरै हुन्छन् । यसले पनि प्रभाव पारेको हुनसक्छ । तर, यस’bout हामीले जनसंख्याविदसँग छलफल गरेर मात्रै निचोडमा पुग्नुपर्छ । खोप प्रयोगकर्ताकै संख्या घटेको’bout पनि विश्लेषण गर्नुपर्नेछ । सर्भेक्षणले देखाएका आधारमा टेकेर हामीले नयाँ ढंगले कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ।
Medical team send to diarrhoea-affected Barpark, following child’s death
समयसिमामा वैधानिक हुन नसकेका मलेसियाका रोजगारदाता र विदेशी कामदार पक्राउ
१९ असार २०७४, सोमबार १६:२१
१५ माघ २०७४, सोमबार ०९:२७